Sharci-dajiyayaasha US inay maqlaan kiis sahaydu blockchain - Blockchain News
Sharci-dajiyayaasha in laga xoreeyo dalka ah. Congress ayaa lagu wadaa in la qabto dhageysi ku saabsan isticmaalka casriga blockchain ee silsilado sahayda caalamka todobaadka soo socda.
Laba Hoosaadyada laga xoreeyo dalka ah. Guddiga House on Science, Space iyo Technology – Cilmi-baarista iyo Technology, iyo Oversight – la kulmi doonaa on May 8, ogeysiis cusub ee la daabacay ayaa muujinaya. maqalka waxaa xaq u leedahay “Kabaallaynta Blockchain Technology in la horumariyo Management Chain Supply iyo Dagaalka been Badeecadaha.”
maqalka ee isbuuca soo socda waa kii ugu horeeyay ee thinking in on kiis la isticmaalo gaar ah – maamulka sahaydu – in uu leeyahay xiiso urursaday ayaa ka tiro ka mid ah corporates waaweyn oo adduunka ah.
consum South Korea ee ...
maamulka Korean f ...
BitGo regul helo ...
Post Previous:Argentina LOO BAAHANYAHAY si loo soo dajiyo 4,000 TO 5,000 ATM CRYPTO dalka
Post Next:Coinbase ayaa qorshaynaysa in ay xafiis cusub ka furi Chicago
rolin ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 16, 2018 at 2:31 AM
noperas ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 22, 2018 at 4:51 PM
Cafarelli ayaa sheegay in:
Laga yaabaa 28, 2018 at 3:18 PM
Bukov ayaa sheegay in:
Kuper ayaa sheegay in: